China SPC Ft SM-053 Nrụpụta na Factory | N'akụkụ
SPC bụ ụdị ala ọhụrụ, nke a makwaara dị ka ala plastik nkume. Ihe ndabere ya bụ bọọdụ mejupụtara ejiri okwute mee na ihe polymer thermoplastic polymer mgbe agwakọtara ya ma wepụta ya na oke okpomọkụ. N'otu oge ahụ, ọ nwere njirimara na njirimara nke osisi na plastik iji hụ na ike na ịdị ike nke ala. SPC sitere na acronym nke plastic plastic composites, nke a na-akpọkwa ala plastic plastic.
SPC bụ isi nke calcium ntụ dị ka ihe akụrụngwa na akwụkwọ extruded site na plasticization. Ọ na-emi esịnede SPC polima mkpụrụ oyi akwa, PUR Crystal Shield uzo oyi akwa, na-eyi na-eguzogide oyi akwa, agba film mma oyi akwa na juu na nkịtị rebound oyi akwa.
Okwu mmalite nke ọkọlọtọ SPC nke ala ugbu a, a na-eme ọkọlọtọ mba nke PVC flooring GBT maka SPC flooring na China 34440-2017, ọkọlọtọ na-akọwapụta okwu na nkọwapụta, nhazi, njirimara ngwaahịa, ihe achọrọ, ụzọ nyocha na nyocha iwu, yana akara, nkwakọ ngwaahịa, njem na nchekwa nke isiike flooring. Ọkọlọtọ a bụ na ọdabara na flooring na ịkwanyere resin efere dị ka isi akụrụngwa na-eji maka ime ụlọ yingtọ site elu lamination.
Uru: 1, nchebe gburugburu ebe obibi na formaldehyde na-enweghị onwe, ala SPC na usoro mmepụta na-enweghị gluu, yabụ na ọ naghị enwe formaldehyde, benzene na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, ezigbo 0 formaldehyde green floor, agaghị emerụ ahụ mmadụ ahụ. 2. Mmiri na-enweghị mmiri na mmiri, SPC ala nwere uru nke mmiri na-enweghị mmiri, mmiri na-egosi mmiri na ebù, nke na-edozi adịghị ike nke ala osisi ọdịnala nke na-atụ egwu mmiri na mmiri, yabụ enwere ike ịtọ ụlọ SPC na mposi, kichin na mbara ihu. 3. Ibu dị mfe ibufe, ala SPC dị oke ọkụ, ọkpụrụkpụ dị n’etiti 1.6mm-9mm, ibu dị n ’otu square bụ naanị 2-7.5kg, nke bụ 10% nke ịdị arọ nke osisi nkịtị.
Nke gara aga: SPC Ft SM-052
Osote: Ogige SPC 501